जबराको जब्बर अस्त्रले गर्यो कमाल, न्यायाधीशपछि वकिलहरुले पनि गरिदिए यस्तो बोल्ड निर्णय ! – GALAXY
जबराको जब्बर अस्त्रले गर्यो कमाल, न्यायाधीशपछि वकिलहरुले पनि गरिदिए यस्तो बोल्ड निर्णय !
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जब्बर अस्त्रले कमाल गर्ने संकेत देखिएको छ । जबराले एक विज्ञप्ति जारी गरी विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एशोशिएसनलाई वार्ताको आव्हान गरे । उनले अदालतमा सुधारका लागि प्रस्तावसहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि बारले भने राजीनामाको अडान कसेर वार्ता अस्वीकार गर्यो । तर, त्यो विज्ञप्ति अस्त्र बनिसकेको छ ।
जबराको अस्त्रले विद्रोहमा उत्रिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विभाजित भए । १९ न्यायाधीशमध्ये ५ जना इजलास बस्ने निर्णयमा पुगे । अन्य न्यायाधीशहरु पनि निरन्तरको इजलास बहिष्कारको विपक्षमा उभिएका छन् । विद्रोही न्यायाधीशहरुको समूह कमजोर हुँदै गएको छ ।
नेपाल बार एशोशिएसनमा पनि वकिलहरु विभाजित भएका छन् । कतिपय पदाधिकारी र सदस्यले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्तामा बस्नुपर्ने मत राखेका छन् । बार कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले वार्तामा जोड दिएका छन् । न्यायपालिका डुबाउने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरे । बारभित्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको विज्ञप्तिले फरक मतहरु आउन थालेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुमध्ये नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेनिकट अधिकांश बारको आन्दोलनप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । निरन्तरको इजलास बहिष्कारले नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । काँग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले तिहार अगाडि नै विज्ञप्ति जारी गरी इजलास बहिष्कारको आलोचना गरेका थिए ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको अस्त्रले एकै दिनमा फरक परिस्थिति विकास भएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरममा पनि जबराको राजीनामा माग्ने मत घट्दै गएको छ ।प्रधानन्यायाधीश मध्ये ४ जनाले मात्र राजीनामा मागेका छन् । अन्य प्रधानन्यायाधीशहरु मौन छन् । उनीहरु जबराको राजीनामाको विपक्षमा उभिएका छन् ।
यता जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले एमालेलाई प्रतिगमनकारी शक्तिको संज्ञा दिएका छन् । संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत १५ दिने कार्यक्रम लिएर गोरखा आएका उनले सोमबार एमालेलाई टाउको उठाउनसमेत दिन नहुने तर्क गरेका हुन् ।
‘एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई ध्वस्त पार्ने ढंगले विध्वंसात्मक दिशातिर लम्किरहेकाले उनलाई रोक्न अन्य पार्टीको तालमेल आवश्यक छु, उनले भने, ‘प्रतिगमनको हर्कत रोक्नका लागि पाँचै दल एकमत हुन नसके पनि जससँग सहमति हुन्छ, ती दल गठबन्धन गरेर प्रतिगमन शक्तिलाई टाउको उठाउन दिनुहुँदैन ।’
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एस०का नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने बताइरहे पनि नेता भट्टराईले भने यसबारेमा कुनै सहमति नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।
‘सरकारमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धन चुनावसम्म लैजाने विषयमा अहिलेसम्म सहमति भएको छैन । म यता आएपछि एक(दुई दिनयता भएको भए मलाई थाहा छैन । तर, गठबन्धन भइदिए हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ मलाई पनि लागेको छ’, उनले भने । हाल मुलुकमा न्यायपालिकाको विवाद गिजोलिएर गएकाले व्यवस्थापिकाबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘राज्यलाई अपांग बनाएर लामो समय राख्नुहुँदैन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काबीच समस्याग्रस्त हुँदा त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरूले समाधानको पहल लिनुपर्छ । भित्रबाट मात्र हल भएन भने व्यवस्थापिकाबाट समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
संगठन सुदृढीकरण अभियान लिएर २२ कात्तिकदेखि भट्टराई गोरखाको गाउँगाउँमा छन् । दुर्गम गाउँमा पैदल हिँडेर र तल्लो भेगमा गाडीमार्फत टोलटोलमा पुगेर उनले जनता भेटघाट गर्नुका साथै स्थानीय स्तरका समस्या, जनताको गुनासो सुन्ने, घरघरमा पुगेर सल्लाह लिने गरिरहेका छन् ।